အချိန်တိုအတွင်း စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အပြင် လူနာကိုလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု နည်းပါးစေတဲ့ 640 Slice CT Scanner - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
စက်တင်ဘာ 11, 2018 Navy Tanjararak, M.D. Pawat Wittayapalotai, M.D.
640 – Slice CT Scanner ဟာ ပုံမှန် scanner များထက် ဓာတ်ရောင်ခြည် ၈၀% လျော့နည်းပါတယ်။
640 – Slice CT Scanner ဟာ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံထက်နည်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတင် နှလုံးတစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရှုပေးနိုင်ပါတယ်။
640 – Slice CT Scanner ရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့လည်ပတ်မှု နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်မှုဟာ CT Scan တွေရဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်းယူတဲ့ နည်းပညာကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ် 640 – Slice CT Scanner ရဲ့ ရောဂါရှာဖွေပေးနိုင်မှုကတော့ ဒီကနေ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာ အံ့မခန်းတဲ့ နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေနဲ့ ဇီဝဆဲလ်အစုအဝေး ဖွဲစည်းပုံတွေကို ကောင်းစွာ ရုပ်လုံးပေါ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ရောဂါဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်များ အထူးအားကိုးရတဲ့ scanner ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
640 -slice CT scanner ဟာ ပုံမှန်scanner များထက် ဓာတ်ရောင်ခြည် ၈၀% လျော့နည်းပါတယ်။ လူနာတဦးချင်းစီအတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် လူနာအပေါ်ကို ကျရောက်တဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ နည်းပါးရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ လူနာတွေအတွက် အန္တရာယ်လျော့နည်းပြီး ကလေးတွေကို ကုသပေးဖို့အတွက် အထူးကောင်းပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်လည်း နည်းနည်းပဲကျ၊ မရိုက်ခင်ထိုးရတဲ့ဆေးလည်း နည်းနည်းပဲလိုအပ်၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးလည်းနည်းနည်းပဲ ပေးဖို့ လိုတာကြောင့် လူနာမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းနည်းပဲ ရပြီး ပိုလို့အန္တရာယ်ကင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Scanner ရဲ့ နောက်ထပ် ကောင်းတာတစ်ခုက ရိုက်ကူးခံရမယ့်လူနာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိဖို့အတွက် ၇၈ စင်တီမီတာ အဝကျယ်တဲ့ စက်ကွင်းအဝိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် scanner တွေမှာ မဆံ့တဲ့ လူနာတွေတောင် ချောင်ချောင်ချိချိ ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူနာမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ အများကြီး လျော့သွားပါတယ်။
CT Scan ပုံရိပ်ဖော်တယ်ဆိုတာ တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ ပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးပြီး တွဲရ ဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင် Scanner တွေက ဖြည်းဖြည်းပဲ လည်နိုင်ပြီး ပုံရိပ်ဖမ်းတာလည်း နှေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ရောဂါရှာဖွေပေးနိုင်မှုကလည်း သိပ်အများကြီး မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ခု 360 slice CT Scanner ကတော့ လည်တာလည်းမြန်၊ ပုံရိပ်ဖမ်းတာလည်း မြန်ပြီး ရောဂါတွေလည်း ပိုပြီးတော့ ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးတစ်ခုလုံးကို ဖတ်ဖို့ ကြာတဲ့အချိန်ဟာ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ အောက် မှာပဲ ရှိပါတယ်။ စက်တစ်ပတ်လည်ဖို့လည်း တစ်စက္ကန့်အောက်ပဲ ကြာတာဖြစ်ပေမယ့် ပုံရိပ်တွေကတော့ အရမ်းကို ကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ်။ စက်လည်တာ မြန်တော့ ဓာတ်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုကလည်း လျော့နည်းသွားပါတယ်။ သူက မပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဖတ်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း ပိုပြီး လွယ်ကူလာပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရင် Scanner နဲ့ ရိုက်ခဲ့တုန်းက ပုံရိပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရခဲ့တဲ့ နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းသွားပါတယ်။ ဒီ Scanner နဲ့ ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရင် မိုဒယ်ဟောင်းတွေက ပုံရိပ်တွေ မပြတ်သားတဲ့အတွက် ရောဂါရှာဖွေရာမှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခု ဒီScanner ကျတော့ အစက်အပြောက် သေးသေးလေးတွေကအစ ကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်ပြတ်သားသား ပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ အချိန်တို သွားတဲ့အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း လျော့သွားပါတယ်။ လူနာဟာ အဖြေအတွက် အကြာကြီးစောင့်စရာလည်းမလိုတဲ့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဥပမာ – အသင့်အတင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နှလုံးရောဂါအဆင့် (CAD) ဆိုရင် ဆေးရုံတက်ပြီး စောင့်နေစရာမလိုတော့ပါ။ အဝလွန်နေသူတွေမှာရှိတဲ့ CAD ကိုလည်း အစောပိုင်းအဆင့်ကတည်းက ဖော်ထုတ်ပေး နိုင်နေပြီ ဖြစ်လို့ စရိတ်သက်သာတဲ့ ကာကွယ်တားဆီးမှု ကုထုံးတွေနဲ့ အချိန်မီ ဆောင်ရွက်ပေးလို့ ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အရင် Scanner မှာ မရနိုင်တဲ့ အားသာမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု လုပ်နိုင်သေးတာက သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်မြင့်မားမှုကို တွက်ချက်ဖို့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နှလုံးထဲမှာ ကယ်လစီယမ်ပမာဏ ဘယ်လောက်ပဲ ရှိနေပါစေ၊ လူနာဟာ ကာကွယ်တားဆီးမှု ကုထုံးတွေကို စတင်ခံယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စောစော ကုသမှုမခံယူရင် သွေးလွတ်ကြောအတွင်းပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ပြန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်းများတဲ့အပြင် ကူးစက်ပြန့်ပွားဖို့ လွယ်ကူပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ ရောဂါရှာဖွေမှု နည်းလမ်းတွေအစား ဒီ scanner ကိုအသုံးပြုပြီး ရောဂါ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဦးနှောက်နှင့် ပင်မသွေးလွှတ်ကြောဆိုင်ရာ လူနာတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးဖွင့်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရတဲ့ လူနာတွေမှာ အန္တရာယ်အများဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ ပိတ်နေတဲ့သွေးလွတ်ကြောအဆို့ရှင်ကို အပ်နဲ့ဖောက်ပြီး အစားထိုးကုသတဲ့ နေရာမှာ ကျဉ်းမြောင်းပြီးကောင်းမွန်စွာမပွင့်နိုင်တော့တဲ့ သွေးလွှတ်ကြောမကြီးအဆို့ရှင်အတွက် အစားထိုးမှုတွေကို 640-slice CT scanner သုံးပြီး လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
640 – slice CT scanner ဟာ သွေးလွှတ်ကြောအဆို့ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာဝန်တွေကို အထောက်အကူကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ရုံသာမက လူနာကိုလည်း အစားထိုးမယ့် အဆို့ရှင်ကို ခြေထောက်သွေးလွှတ်ကြောကတစ်ဆင့် ညှပ်ရိုးအနီးကို ထိုးသွင်းမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပင်မသွေးလွှတ်ကြောထဲကို တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပြီးနေရာချထားမှာလား၊ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင် အန္တရာယ်ကင်းပြီး သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ ကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော ပျက်စီးလို့ ခွဲစိတ်အစားထိုးပြီးသားလူနာတွေ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ခွဲ ဖို့ လိုရင်လည်း ဘယ်နေရာမှာ ထပ်ခွဲရမယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေပေးနိုင်လို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေ အားထားရတဲ့ 640 – slice CT scanner ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်လည်း Scanner’s 4D DSA (သွေးစီးဆင်းမှုတွင် ပြဿနာရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ဦးနှောက် အတွင်းရှိသွေးကြောများ Scan ဖတ်ခြင်း) နည်းလမ်းဟာ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောကုထုံးမှာ အသုံးဝင် ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ လေဖြတ်လူနာကို ကူညီပေးနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးကြည့် နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်တခုလုံးကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း scan ဖတ်ပေးနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုပြီး scan ဖတ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံ နှင့် တည်ဆောက်ပုံတွေကို ဆယ်မိနစ်အတွင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
အရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အရိုးနုတွေရဲ့ ဇီဝတစ်ရှူးပျက်စီးမှုတွေကို တစ်ခါစစ်ဆေးရုံနဲ့တင် ရှာဖွေပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာလူနာတွေရဲ့ အရိုးခွဲစိတ်မှုတွေအတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ တကယ်လို့ လူနာများဟာ စတီးချောင်း စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုရင်လည်း scan ပုံရိပ်မှာ ပေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီသတ္တုအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ဟောင်းနွမ်းလာမှု၊ ပြောင်းလဲလာမှု စတာတွေကိုလည်း ကြည့်နိုင် ပါတယ်။
အရိုးလူနာတွေအတွက် နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ တစ်ချို့ အရိုးလူနာတွေကို Scan ရိုက်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ကိုယ်လုံး စက်ထဲ ဝင်စရာ မလိုတော့တာပါပဲ။ ဥပမာ လက်ကောက်ဝတ်တို့ တံတောင်ဆစ်ရိုး တို့ စတာတွေကို scann ဖတ်ဖို့ လိုတဲ့အခါ လူနာဟာ စက်ဘေးက ခုံလေးမှာ ထိုင်ပြီး လက်ကို scanner ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တင် ရပါတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ 640 Slice CT Scanner ကြီးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ၊ လူနာတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ရော သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှုတွေအတွက်ပါ ဘယ်လို အားသာချက်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ 640 Slice CT Scanner အကြောင်း မိတ်ဆက် တင်ပြလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်တိုအတွင်း စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အပြင် လူနာကိုလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု နည်းပါးစေတဲ့ 640 Slice CT Scanner 640 -slice CT scanner ဟာ ပုံမှန်scanner များထက် ဓာတ်ရောင်ခြည် ၈၀% လျော့နည်းပါတယ်။ လူနာတဦးချင်းစီအတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါဝင်တာကြောင့် လူနာအပေါ်ကို ကျရောက်တဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏ နည်းပါးရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, 2005. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University , 2007